China Lauryl Dimethyl Amine oxide, CAS NO.1643-20-5, OA-12 fekitari uye vagadziri | Kerui Makemikari
Zita rekutengeserana: OA-12
Zvivakwa & Zvishandiso:
OA-12 rudzi rwe zwitterionic surfactant, isina kuchena yakajeka mvura, isina kusimba cationic surfactant, cationic mune acidic svikiro, nonionic mune alkaline svikiro, yakanyunguduka mumvura uye polar organic solvent, zvishoma kusungunuka mune isingaite polar organic solvent.
OA-12 ine yakanyanya kusimba, anti-static, yakapfava, kudonhedza uye furo inowedzera kuita.
OA-12 ine yakaderera inogumbura mashandiro, ayo asingori chete anogona kunyatso deredza anionic sipo inogumbura, asi zvakare ine bactericidal, Ca-sipo inopararira, kutapukirwa nehunhu kukuvara uye zvichingodaro.
OA-12 inonyanya kushandiswa kugeza inoita kuti vhudzi riwedzere kupfava, nyore kukama, kupupa furo, kupenya kwakapfuma. OA-10 inogona zvakare kushandiswa patafura, yekuwachira, yekuvaka kunze kwemadziro uye imwe yakaoma nzvimbo, yekuchenesa mumiriri yekupa zvigadzirwa kuti zvidzivirire, kudzikisira kukurudzira uye synergism.
OA-12 ine zvakanakira kuyerwa kushoma, kushanda kwepamusoro, kunyorova kwakasimba zvichienzaniswa neyechinyakare 6501.
Hauonekwe kupenya yero yakajeka mvura
50kg uye 200kg dhiramu repurasitiki. Kuchengeterwa kwegore rimwe mukamuri rine mumvuri uye nzvimbo yakaoma.
Dzivisa kusangana neziso uye ganda, kana uchinge wasangana, pukuta nemvura.